विज्ञ भन्छन्- दसैंमा काठमाडौंबाट घर जानेले गाउँ-गाउँ पुर्‍याउन सक्छन् कोरोना:: Naya Nepal
संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘दसैंमा दुई चार सय हैन लाखौं मानिस गाउँ जान्छन्। त्यसरी जानेहरूबाट संक्रमण फैलिने ठूलो डर छ। पहिले संक्रमण फैलिएर हराइसकेको ठाउँमा पनि पुनः संक्रमण फैलिने डर छ।’
त्यसरी दसैंमा घर जाँदा आफूमा संक्रमण नभए पनि यात्राका क्रममा संक्रमण हुनसक्ने र त्यसबाट आफ्ना घरका सदस्यहरूमा सर्ने जोखिम रहने डा. सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, ‘सबैमा लक्षण हुने भएपनि थाहा हुने थियो। त्ससैले हिँड्ने बेलामा संक्रमण नभए पनि बाटोमा लाग्न सक्छ। जसले गर्दा गाउँघरमा संक्रमण फैलिने जोखिम असाध्यै छ।’
डा. सुवेदी भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट जानेहरूले सकेसम्म परिवारका ज्यष्ठ सदस्यहरूको नजिक नगएकै राम्रो हुन्छ। नमस्कार पनि अलिक टाढाबाटै गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले बेस हुन्छ।’ त्यस्तै टिका लगाउँदा वा भेला हुँदा पनि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
सकेसम्म टिका लगाउँदा भिडभाड नगर्न र बन्द कोठा भेला नहुन उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘टिका लगाउँदा एकैचोटी धेरै भेला हुनु हुँदैन। दूरी कायम गरेर टिका लगाइदिनुपर्छ। त्यसरी गर्दा संक्रमण सर्ने जोखिम धेरै कम हुन्छ। टिका लगाउँदा पनि मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ।’
उनले भने, ‘ठूलो जनघनत्व भएका ठाउँहरूमा पहिले पनि संक्रमण फैलिहरेकै होला तर धेरै संक्रमितहरू भेला हुँदा संक्रमण दर फेरि माथि जानसक्छ। त्यसैले काठमाडौंबाट त्यस्ता ठाउँहरूमा जाँदा संक्रमण बढ्न मद्दत गर्छ।’
डा. पुन भन्छन्, ‘अहिले पनि अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू बसमा घर जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा त्यहीँ संक्रमण फैलिन सक्छ। जसले गर्दा घर पुगेपछि अन्य सदस्यमा पनि संक्रमण सर्ने जोखिम हुन्छ।’
दसैंमा घर जानेहरूले बसमा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘घर जाँदा बसमा यात्रा गर्दा बारम्बार आँखाहरू मिच्नु हुँदैन। सकेसम्म अरूसँग कुरा गर्नुहुँदैन। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरे संक्रमण सर्नसक्ने जोखिम निकै कम हुन्छ।’
सकेसम्म एकअर्काबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उनको जोड छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ‘साइलेन्ट ट्रान्समिसन’ को रुपमा संक्रमण फैलिरहेको उनको तर्क छ।
डा. पुन भन्छन्, ‘काठमाडौंमा ‘साइलेन्ट ट्रान्समिसन’ भइरहेको छ। आइसोलेसनमा बसेकाहरूसँग कुरा गर्दा धेरैलाई संक्रमण कहाँबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन। त्यसैले यो भित्रभित्रै विस्तारै सल्किरहेको छ।’
सात हजार पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा ५० हजार बढीको रोजगारी संकटमा
पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
देशभर रहेका ७ हजार पार्टी प्यालेस व्यवसाय बन्द हुँदा ५० हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको र लाखौंको संख्यामा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरुले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लिलाबहादुर जिसिले राज्यले तत्काल निर्वाध रुपमा पार्टीप्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे। अध्यक्ष जिसिले होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तर पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने कुरा नमिल्दो भएको बताए।
भौतिक दूरी कायम गर्दै सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गर्दा समेत व्यवसाय बन्द गरिनुको कारण सरकारले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले पार्टी प्यालेस खोल्दा संक्रमण फैलिन्छ भन्ने भ्रममा सरकार रहेको बताए। ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टका पार्टीहलहरु सञ्चालन हुँदा कोरोना नसर्ने तर पार्टी प्यालेसका हल सञ्चालन गर्दा कोरोना सर्ने कुरा आफूहरुले नमान्ने पनि अध्यक्ष जिसिले बताए।
नेपाल राष्ट्रिय पार्टीप्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले करिब ७ महिना यता पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायबाट नै पलायन हुने स्थितिमा आफूहरु पुगेको बताए। अहिले देशभर २ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरु पलायन भइसकेको बताउँदै अझबढी क्षति हुने देखिएको बताए।
५० हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने मात्र नभएर सरकारले वार्षिक २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व समेत गुमाएको उनको भनाई छ। त्यस्तै पछिल्लो समय आफूहरुसँग कर्मचारीका लागि तलब खुवाउन समेत पूँजीको अभाव भएको उनले बताए।
त्यसबाहेक पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा कृषि उत्पादनको खपत घटेको र बजारमा महंगी बढेको उनले दावी गरे। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कुल कृषि उत्पादनको २५ प्रतिशत पार्टी प्यालेस व्यवसायमा खपत हुँदै आएको छ। यसबाट अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौंको रोजगारी प्रभावित भएको उनले बताए। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको पनि उनले बताए।
अन्य उद्योग व्यवसाय सरह यो व्यवसायलाई लिन पनि प्रवक्ता पाण्डेले सरकारसँग आग्रह गरे। संकटको बेला पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले सरकारबाट कुनैपनि राहत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
व्यवसायीहरुले आफूहरु कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड सहित उच्च सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको पनि बताएका छन्। सरकारले आर्थिक कारोबारलाई चलायमान गराउन र व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति आउन नदिन पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका हुन्।